Used goods yeBlackBerry — ishibhile kuphela — Everything for BlackBerry. InfoResheniya / bbry.net
Used goods yeBlackBerry — ishibhile kuphela
Ama-Info Solutions — ungumhlinzeki onokwethenjelwa wezingxenye ezithengisayo nezesekeli zeBlackBerry emhlabeni wonke, kuhlanganise ne-USA, Canada, Europe ne-Asia. Silungele ukukunikeza hhayi nje kuphela okusha, kodwa futhi i-used goods ye-BlackBerry — yithuba elihle kakhulu lokulondoloza, kodwa ngesikhathi esifanayo kulondoloza ikhwalithi.
Kungani uthenga used replacement parts nezesekeli zeBlackBerry?
Kuyinto eshibhile kuphela. Yebo, ngezinye izikhathi kuyithuba lokuthenga umkhiqizo wokuqala futhi omusha cishe ku-50-90% eshibhile! Ngabizi ngaphezu kuka-Avito!
Abanye benu bayabonga ngokukhethekile ukubukeka, nokunye okusebenzayo kwe—. Siyaqonda lokhu, futhi kulabo abakwazisa okusebenzayo, siphakamisa ukunaka i-used goods. Isibonelo, kungani ufake iskrini esisha esikhundleni sedivaysi ephukile esivele "igugile", ngoba into ebaluleke kakhulu i— ukuyibuyisela ukusebenza! Izingxenye zangempela zinde isikhathi eside kangangokuba izinguqulo zabo ze-used "ziyosinda" i-smartphone ngokwayo.
Siqinisekisa ukusebenza okugcwele kwe-used goods ye-BlackBerry. Kusukela okusha, bahluka ngokubukeka kuphela.
Isizathu sokuthola i-BlackBerry endala
Siphonsa iBlackBerry yakho ephukile ebhokisini elide, ngoba awufuni ukuchitha imali ekukulungiseni? Lungisa nge-used replacement parts, kuyabiza! Uzoba ne-smartphone yesibili, kahle, unike ingane yakho noma. Wonke umuntu uyaqonda ukuthi ifoni esebenzayo ingcono kunezo ezimbili eziphukile.
Sithumela i-BlackBerry used emhlabeni wonke.
Ukubukeka, imigomo yokuthenga i-BlackBerry used nokulethwa ezifundeni
I-Used goods — akuyona imikhiqizo emisha, futhi inezinkinga zangaphandle . Lokhu kungaba:
Izingxenye zecala, zisuswe ku-used-smartphones
Izesekeli ezisetshenziswe ngaphambili
Imikhiqizo emisha eneziphambeko zangaphandle, etholakala, isibonelo, ngesikhathi sokuhamba
Sicela uqaphele ukuthi ezinye izingxenye zangaphakathi ezibonakalayo azikhathaleli, isibonelo, ama-microcircuits, izikhulumi, ama-vibration motors, izixhumi, ama-antenna, angasuswa kumadivayisi amasha noma e-used, kodwa athengiswe njengamasha.
Ukukhubazeka okubonakalayo kuhlukile, kodwa ukusebenza kwe-BlackBerry used kugcinwa ngokugcwele . Lokhu kusho ukuthi izinkinobho zizosebenza emgqeni, i-trackpad izoba nempendulo enhle, isibuko sizobonisa, futhi ngeke kube khona ukuchohloka noma iziphuphu kuso.
Yonke iused goods yethu yeBlackBerry inesimo esihle . Asithengisi "ukubulawa ngokuphelele" i-used goods, izikrini eziphukile nezingxenye zokungcebeleka ezingcolile i-— sinikeza okunye okunye okukwenziwayo kwemikhiqizo emisha yokulondoloza kwakho. Imikhiqizo ngaphambi kokudayiswa ihlanzwa ngekhambi elikhethekile futhi lihlolwe ukusebenza. Nazi amazwana ambalwa ezinhlobonhlobo zeused goods:
Amabhethri okuqala namakhophi: alondolozwe i-70% + imithombo
Izikrini zokuthinta izikrini nezikrini: ngaphandle kwemifantu ne-chips, aphuliwe
Amakhadi ememori: ayikho into ebhaliwe yokubhala nokufunda iziqephu
Amakhibhodi: zonke izinkinobho zicindezelwa, ukubhalwa kokubhala kulungile
Izingxenye zomzimba: ukusebenza kwazo zonke izakhi kugcinwa
Ihlanganisa: ubuqotho bugcinwe, ngaphandle kokuphumula
Izithombe used goods asizi. Kodwa-ke, i-used goods ibaluleka ngaphezu kwama-ruble angu-5 000, sizowafakela ngesicelo sakho.
Ithumela i-BlackBerry used emhlabeni jikelele. Sizokhetha ukuletha umkhiqizo omuhle kakhulu okhona.
Indlela yokuthola ukuthi iyiphi iused goods yeBlackBerry esitokisini
Ungabona ukutholakala kwama-used-izinguqulo zemikhiqizo ngqo kithi kusayithi:
Uma ubona umkhiqizo ekhasini nokuthi leli bheji i— iyatholakala kukhona inguqulo yayo ye-used. Hambisa isikhombisi ukuze uthole intengo yayo nolwazi olwengeziwe.
Kumakhasi wemikhiqizo ngayinye, unake izihloko zezithombe zemibukiso. Ngokuya kolwazi ngokutholakala komkhiqizo omusha, ●, kungenzeka kube nesithonjana se-,, ukukwazisa ngobukhona be-used-version. Bamba i-cursor ngolwazi oluthe xaxa.
Iwaranti nenqubomgomo yokubuya
I-used goods BlackBerry ihlanganiswe iwaranti efanayo kanye nemibandela yokubuya njengemikhiqizo emisha .
Okusho ukuthi, ungabuyisa ukuthenga ngaphakathi kwezinsuku ezingu-15? — Yebo.